Rotary Drilling Rig ဆက်စပ်ပစ္စည်းစက်ရုံ | တရုတ် Rotary Drilling Rig ဆက်စပ်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူများ၊ ပေးသွင်းသူများ
ဆက်သွယ်ထားသော Kelly ဘား
ပွတ်တိုက်မှု kelly ဘား
ကွန်ကရစ်ပိုက် Hopper အတွက်အချင်း (mm) အမြင့် (mm) အလေးချိန် (kg) 408 950 70 508 850 75 658 870 91 758 970 123 1058 1250 207 Conduit Length (mm) အလေးချိန် (kg) 1000 49 2000 86 3000 123 4000 160 5000 197 6000 234 Hopper2DH KG m3 1500 1270 179 1 1500 1670 235 1.5 1860 1520 26322000 1350 2883Conduit2L1 KG L2 KG ...
Non-front Edge Double-head Single-spiral Drilling Auger Diameter (mm) Connection Length (mm) Pitch P1/P2 (mm) Spiral thickness δ1 (mm) Spiral thickness δ2 (mm) Teeth quantity Weight φ600 Bauer 1350 400/500 ၂၀ 306575 φ800 Bauer 1350 500/600 20 309814 φ1000 Bauer 1350 500/600 20 30 10 1040 φ1200 Bauer 1350 500/600 30 30 12 1314 φ1500 Bauer 1350 500/600 30 30 14 2022 φ1800 Bauer ...
၁. အောက်ခြေနှစ်ချက်နှစ်ချက်ပွင့်သောရာသီဥတုဒဏ်ခံနိုင်မှုတူးဖော်ခြင်းပုံးအချင်း (မီလီမီတာ) Connection Bucket အမြင့် (မီလီမီတာ) Bucket wall thickness (mm) Base plate thickness (mm) Cutting plate thickness (mm) Teeth quantity Weight φ600 Bauer 1200 16 40 504846 φ800 Bauer 1200 16 40 5061124 φ1000 Bauer 1200 16 40 50 8 1344 φ1200 Bauer 1200 16 40 50 10 1726 φ1500 Bauer 1200 16 40 50 12 2252 φ1800 B ...
၁. အောက်ခြေနှစ်ချက်နှစ်ချက်ပွင့်တူးသောရေပုံး (ဖြောင့်) အချင်း (မီလီမီတာ) Connection Bucket အမြင့် (မီလီမီတာ) Bucket wall thickness (mm) Base plate thickness (mm) Cutting plate thickness (mm) Teeth quantity Weight φ600 Bauer 1200 16 40 50 11 870 φ800 Bauer 1200 16 40 50 14 1151 φ1000 Bauer 1200 16 40 50 20 1382 φ1200 Bauer 1200 16 40 50 26 1778 φ1500 Bauer 1200 16 40 50 28 2295 φ1800 Bauer 10 ...
Double Wall Casing Pipe နှစ်ထပ်နံရံကာရံထားသည့်မြေပြိုကျမှုအခြေအနေများတွင်တွင်းပေါက်များကိုတည်ငြိမ်စေရန်အသုံးပြုသည်။ အစွပ်နှင့်အဆစ်များကို rotary drilling-rigs သို့မဟုတ် casing oscillator များ၏အင်အားကိုခုခံရန်ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။ ၁။ အညစ်အကြေးများနှင့်ကျောက်စရစ်များပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း ၂။ ထုပ်ပိုးထားသောနှင်းခဲများဖယ်ရှားခြင်း ၃။ Chip and seal road reclamation 4. Tar သဲလမ်းပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်း ၅။ ကတ္တရာကြိတ်ခွဲခြင်း ၆။ ဖြန့်ချထားသောပစ္စည်းများဖြန့်ခြင်း 7. ကယ်လ်စီယမ်ကလိုရိုက်၊ မဂ္ဂနီဆီယမ်၊ ကလိုရိုက် (သို့) ရောစပ်ခြင်း အခြားဖုန်မှုန့်နှိမ်နင်းဆေးများ ...